Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0913 lat
Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena 23 Feb - 01 Mar. 2013
Sakaiza ho an'i Adama
Alatsinainy 25 Feb.
Ny Gen.2:20, izay nanomezan'i Adama anarana ireo biby, dia manampy hanambara ilay elanelana lehibe eo amin'ny olombelona sy ny voary hafa rehetra eto an-tany. Tsy nisy biby azo nampitahaina tamin'i Adama. Tsy nisy voary, na karazan-drajako akory aza nitovy tamin'i Adama, satria tsy tahaka ny rajako velively i Adama. Teboka lehibe iray tsara hotsaroantsika io satria maro loatra ankehitriny ny olona eo amin'ny fiaraha-monina mivoy ny hevitra manao hoe rajako
manam-pahaizana, hono, ny olombelona. Tsia, tsy rajako isika, ary ny rajako tsy mba azo natao ho sakaiza sahaza an'i Adama mihoatra noho isika.
Vakio ny Gen. 2:21,22. Inona no zava-dehibe hita teo amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra sakaiza ho an'i Adama?
Tahaka ny namolavolan'Andriamanitra manokana tamin'ny tanany ny vatan'i Adama, dia tahaka izany koa no namolavolany tamin'ny tanany ny vatan'i Eva izay nampiasany taolan-tehezana anankiray avy tamin'i Adama. Raha nisaraka tanteraka ny namoronana azy roa, dia hidika izany fa samy mahaleo tena ara-boajanahary avy izy ireo. Saingy ny fifampizaràna nofo ao amin'olona roa no midika fa ho iray ihany izy roa, sady natao ho "nofo iray ihany".
Rehefa ary i Eva, dia izy no lasa mpanampy tandrify ho an'i Adama (Gen. 2:18, naoty ery ambany). Noforonina avy tamin'i Adama izy, ary nomena an'i Adama (and. 22). Ny dingana namoronan'Andriamanitra an'i Eva dia naneho mazava fa afaka nanome an'i Adama ny sakaiza izay nilainy Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa io hevitra taty aoriana rehefa niatrika ny fakam-panahy i Adama ny amin'ny hiarahany hihinana amin'i Eva ilay voankazo, na hatokiany an'Andriamanitra hijery manokana ny toe-javatra. I Adama dia nanana antony ampy ninoany fa afaka nijery azy manokana Andriamanitra, ary izany no nahatonga ny fahotana vao mainka ho lehibe kokoa.
Vakio ny Gen. 2:23. Inona no nasetrin'i Adama an'i Eva?
Taitra aoka izany i Adama nahita an'i Eva, hany ka velon-kira tamin'ny rima mifamaly ny lehilahy. Io no tononkalo voalohany indrindra ao amin'i Baiboly, sady manambara ny fiheveran'i Adama fatratra ny vadiny, sy ny fatoram-pifandraisana ety dia ety teo amin'izy roa. I Eva no ho endrika voary sahaza sy mitovy aminy tao anatin'ny Famoronana izay nosimbain'ny Fahalavoana.